Ururka P.E.D.O oo Hogaan Cusub Doortey
Mustaqbal kasta ee ummadi ama bulsho leedahay waxa uu ku hora maraa Taariikhna ku yeeshaa waa Asaaskiisa iyo heerkiisa wax barasho, Akhlaaqeed,Deemeed, iyo dhaqanka suuban ee uu leeyahay.
Hadaba waxaa wax lagu farxo isla markaasna lagu tilmaami karo guulo waa wayn oo ay gareen dhamaan ardayda reer Puntland iyo Shacabkoda in si wayn looga hirgaliyey wadaankaan Pakistaan iyo Meelo kale oo ka mida calamka Ururka Hurumarinta Waxbarashda ee Puntlaland.
Ururkaan oo marka magacisa lasoo gaabsho loo yaqaan P.E.D.O ayaa ah urur aradeyeed oo had iyo jeeraale ku howlan sidii uu wax uga badali lahaa baahida joogtada ah ee dhinaca waxbarashda iyo wiliba arimaha bulshada.
Hadaba waxaa ka bilaamay magalada karachi ee dalka pakistan tariikhdu markayk ahayd 25/09/04 dorashada labada golle ee ururka aradayda reer puntland ee ku dhaqan dalkaan Pakistan.
Dorashadaan oo aad muudo hadaba in ay u dhacday qaab aad u wanaagsan isla markasna si wanaag san loosoo abaabulay, ayaa jagada hogaanka ururka ay ku tartamayeen illaa 4 Musharax halkasoo mid kastiba usoo gudbinayey tariikh nololeedkisa iyo heerkisa waxbarasho gudiga qabanqabada Dorashada.
Musharaxinta ku tartamayey jagadaa hogaanka ururka horomarinta wax barashada ayaa guud ahaan lagu tilmaami kara musharixiin ay ka go’an tahay in ay wax qabad mujiyaan isla markaasna shucuur wadani nimo ka muuqatay wajiyadoda. Musharixintan oo kala ahaaa:
Maxamed Ali Farax
A/rahman Farax Ali ( Sudeysi )
Maxamed Abdinur Ahmed
Guud ahaan dorashadaan oo u dhacday si aad u fudud isla markaasna kalsooni buuxda ay ka muuqatay musharax kasta ayaa ka hor intaysan
bilaaban dorashada mushurixinta u tartamaayay hoganka ururka, ayaa waxaa warqado tanasulaad ah kasoo gudbeen sadex kamida musharixinta jagada gudoomiye nimada ururka.
Arintaan oo aad loo soo dhaweyeey ayaa hadaba gudiga qaban qabada u howl galeen arimohoodi dorashada iyo qaabkii kalsonida loosiin lahaa gudoomiyaha isagu isu soo tagay jagada hogaanka ururka ardayda ee Pakistan.
Sadexda Musharax ee tanaasulaadka sameeyey ayaa mid waliba ka jeediyey hadalo aad u wanag san oo kalsonidisa kusiinaayey Musharaxa isagu kusoo haray jagada hogaanka ururka P.E.D.O
Guud ahaanba jawiga doorashada ayaa modaa in uu ahaa mid aad u fudud isla markaasna kalsooni dheeraada lagu wada qabay mudanaha ku guulaystay jagada hogaanka ururka P.E.D.O.
Ugu danbayntii gudiga qaban qaabada dorashada ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in mudane A/raxman Farah Ali (Sudeysi) uu ku guulaystay jagada hogaanka ururka horumarinta wax barashada reer puntland (P.E.D.O).
Waraysi badan oo aan layeenay xubnaha ururka iyo wiliba qaar kamida tartamayaashii jagada hogaanka ururka ayaa waxay noo shegeen in ay aad usoo dhawaynayaan dorashadaan iyo qaabka ay udhacday kuna tilmaamay hogaanka cusub ee ururka in uu yahay nin howl kara isla markaasna aqoon dherada u leh howla nocaan oo kale ah.
Sida la ogsoon yahay ururkaan oo aad u daboolay bahida wax barashada ayaa modaa in dad badani is waydiin karaan meelaha uu ka howl galo ururkani, hadaba ururkani waxa uu ka hawl galaa wadamadaan hoos ku xusan.
¨ Uk, United Kindom
¨ USA United State of America
¨ UAE Unite Arab Emarates
Iyo wadamakale oo aanaanu hada meesha ku xusin balse uu ururku ku raja waynyahay inuu xafiisya ku yeesho mustaqbalka soo socda ee dhow.